Tag: vidreach | Martech Zone
vidREACH: Ihe ngosi vidiyo nke vidiyo nke na-echegharị Prospecting
Saturday, March 28, 2020 Bọchị Sọnde, Machị 29, 2020 Sean Gordon
Ọgbọ ndị bụ isi bụ ọrụ dị mkpa maka ndị ahịa. Ha na-elekwasị anya na ịchọta, itinye aka na ịtụgharị ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na atụmanya nke nwere ike ịghọ ndị ahịa. Ọ dị oke mkpa maka azụmaahịa ịmepụta atụmatụ azụmaahịa nke na-eme ka ọgbọ na-edu ndú. N'iburu nke ahụ, ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa na-achọkarị ụzọ ọhụrụ ha ga-esi pụta ìhè, karịsịa na ụwa a na-ejikarịkarị mba. Imirikiti ndị na-ere ahịa B2B na-atụgharị na email, na-ele ya anya dị ka nkesa kachasị dị irè